Izindaba - Izinzuzo zokupakisha okuzenzakalelayo nomshini we-cartoning
Izinzuzo zokupakisha okuzenzakalelayo nomshini we-cartoning
1. Umshini wokupakisha othomathikhi futhi we-cartoning unciphisa izindleko zabasebenzi futhi ugcina isivinini, ukunemba nokuqina.
2. Ukwenza ngcono ukukhiqizwa kwabasebenzi. Ijubane lomshini we-cartoning othomathikhi lishesha kakhulu kunalelo lokupakisha ngesandla.
3. Uma ukupakisha ngesandla kusebenza isikhathi eside, nakanjani kuzokwenza amaphutha futhi kubangele ukulahleka okungadingekile, okungagwemeka kakhulu uma kusetshenziswa umshini wokupakisha. Yize umshini wokupakisha othomathikhi ungekho amaphutha ayi-100%, izinga lephutha liphansi kakhulu.
4. Umshini wokufaka othomathikhi nomshini we-cartoning ungabonakala ngesandla noma kunzima ukuwufinyelela. Okufana nokupakisha komshini, ukufakwa kwe-inflatable, ukugcwaliswa kwe-isobaric, njll.
5. Ingaqinisekisa ngempumelelo ikhwalithi yokupakisha. Ngokuya ngezidingo zezinto ezihlanganisiwe, kungaba khona izilungiselelo ezahlukahlukene zokuqinisekisa ikhwalithi ngemuva kokupakisha.
6. Impilo yesevisi yomshini wokupakisha imvamisa imayelana neminyaka eyi-6-10 ngaphambili, futhi umshini owodwa wokupakisha ungathatha isikhundla sabasebenzi abayishumi nambili isikhathi eside nomsebenzi omkhulu, ongagcina izindleko eziningi zokukhiqiza zenkampani.
7. Kuvikela umzimba wabasebenzi, njengemikhiqizo enobuthi, ecasulayo, enemisebe, kanye neyonakalisayo. Uma kusetshenziswa ukupakisha okwenziwa ngesandla, nakanjani kuzolimaza umzimba wabasebenzi ngokuhamba kwesikhathi, kanye nomshini wokupakisha othomathikhi Kungagwenywa.
Imishini emaphaketheni ezenzakalelayo kanye nemishini ye-cartoning iya ngokuya ivame kakhulu ezimpilweni zethu. Izinkampani eziningi ngokwengeziwe zisebenzisa imishini yokupakisha ezenzakalelayo enqubweni yokukhiqiza.